वाणिज्य बैंकको डिपोजिट अब सहकारीमा - Wnepal.com
असुरक्षित बन्दै बैंकहरु
बैंकमा सीइओ लगायत अन्य बरिष्ठ कर्मचारीहरु लाखौंमा तलब भत्ता लिन्छन् के का लागी ? यसको जवाफ अब एटिम ह्याकिङ्ग भएका बैंकहरुले जनतालाई प्रष्ट रुपमा दिनु आवश्यक छ । महंगा तलब भत्ता र मिडियाहरुमा महंगा विज्ञापन गर्दैमा बैंकमा विश्वास बढ्दैन काम गरेर देखाउनु पर्छ ।
नेपालका बैंकहरु अब आम नागरिकले विश्वस गर्न पनि सोच्न पर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष, विभिन्न बैंकका सीइओहरु लगायत आर्थिक विज्ञहरुले जनताको पैसा सहकारी र सिरानीमा छ त्यसकाई बैकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन प¥यो भनिरहेका छन् । के यस्तो किसिमले ति पैसाहरु बैंकमा आउछन् । अब बैंकमा जम्मा रहेको पैसामा पनि एक पटक सोच्न पर्ने भएको छ । अब आम नागरिकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक भनेर कुर्लिने बैंकरहरुले नेपाली जनताको रगत र पसिना एक एक पैसालाई सुरक्षा दिन नसक्ने भएको तथ्य यही एटिएम ह्याकिङ्ग बाट प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको उत्कृष्ट मानिने मुुख्य नविल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंकको समेत एटिएम ह्याक भई हजार होइन, लाखौं होइन, करोडमा रकम चोरी भएको छ । बैंकले मिडियामा विज्ञापन धेरै बजाएर ग्राहकको विश्वास जितिदैन सीइओ साबहरु अब सहकारीको पैसा होइन । बैंकका पैसा सहकारीमा जानेछन् ।
हामी जनताहरु पनि एक पटक सोचौं हामीहरुले बैंकमा राखेको पैसामा ती बैंकहरुले चर्को ब्याज लगाएर ऋण दिने गर्छन् । डिपोजिटमा ब्याज कम हुन्छ । तर ऋणको लागि चर्को ब्याज । जनताले रगत पसिना गरी जम्मा गरेको पैसा बैंकमा जम्मा गर्छन । ती बैंकको सुरक्षा खोई ? सहकारीमा त कमसेकम आफ्नो घर नजिक उक्त पैसा कहाँ कसरी लगानी भयो । लगानीको अवस्था कस्तो छ । सहकारीमा पैसा कत्तिको सुरक्षीत असुरक्षीत भन्ने कुरा हामीले आफ्नै अगाडी देखी राखेका हुन्छौं ।
सहकारीमा कोही विदेशीबाट सिस्टमको डाटा नै चोरी गरी पैंसा चोरी त हुँदैन कि कसो । यसरी बैंकहरुमा भइरहेको घटना बढ्दै जाने हो भने बैंकहरुको डिपोजिट रित्तिदै जाने र सहकारी अझै बलियो बन्दै जाने निश्चित नै भएको छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकलाई समेत नाफामा विकास बैंकहरुले पछि पारि सकेको तथ्य हामीहरुले देखि सकेका छौं । सचेत भया ।
काफ्लेको ‘मेरो मुटु’को भिडियो सार्वजनिक